စံဝင်းချို Daily Hope Children Need to Know God Loves Them
“အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ထိုအရာ တို့သည် အလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏။ ထိုကြောင့်၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုန်းအသရေတန်ခိုး တော်ကို ခံစားထိုက်တော်မူ၏ဟု လျှောက်ဆို၍၊ ပလ္လင်တော်ရှေ့၌ မိမိတို့သရဖူများကို ချထားကြ၏။”(ဗျာ ၄း၁၁)
စကားပြောဆိုနေကြသည်ထဲမှမိဘများသည်ခလေးများနှင့်ပြောဆိုကြရန်လည်းလိုအပ်ပေသည်၊ ပထမအရေး အကြီးဆုံးကလေးများကိုပြောရမည့်အကြောင်းအရာသည်၊ ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ချစ်ခင် ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပေသည်။
ခလေးများနားလည်ရန်မှာ၊ သူတို့ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသည်၊ ဘုရားသခင်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်၊ အသက်တာတွင် နားလည်ခံယူတတ်ခြင်းမရှိပါ။ ဟေရှာယ ၄၄ကပြောသည်မှာ “သင့်ကိုဖန်ဆင်း တော်မူ သောဘုရား၊ ဘွားစကပင် သင့်ကိုပြုပြင်၍၊ နောင်၌လည်း မစလတံ့သော ထာဝရဘုရားမိန့် တော်မူသည်ကား၊ ငါ့ကျွန်ယာကုပ်၊ ငါရွေးကောက်သောသူယေရှုရုန်၊ မစိုးရိမ်နှင့်။” (ဟေရှာ ၄၄း၂)
ခလေးများသိရန်မှာဘုရားသခင်သည်သူတို့အားစိတ်ကူး၊အတွေးအခေါ်များကိုမြင့်တင်ပေးသည်။ သူတို့သည်တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်အစီအစဉ်မရှိကြပါ၊ ဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလဲမဟုတ်ပါ၊သူတို့ကို ဘုရားသခင်ကသိတယ်နှင့်ချစ်သည်၊ သန္ခေတည်ကထည်းကဖြစ်သည်။
ယခုဘယ်မိဘမှ ပကတိ ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်သည်မရှိပါ၊ သူတို့သည်ကောင်းသောနေ့နှင့်ဆိုးသောနေ့များရှိကြ သည်။ ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မှာမရှိပါ။ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဒီအခြေအနေအပေါ်အခြေမခံပါ။ ဘုရားသခင် သည်။ တနေ့ချစ်သည် နောက်တနေ့မချစ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါ၊သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ထာဝရဖြစ်သည်၊ အပြောင်းအလဲမရှိပါ။ ဤအရာသည်သူ၏စရိုက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်မည်သူမည်ဝါ၊ ဘာလုပ်သလဲ မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းကိုရပ်၍မရပါ၊ ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်း သည်၊ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ရန်လုပ်ထားသည်။
ခလေးတွေဒါကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူတို့ကိုပြောရန်မှာ၊ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းကိုဘယ်လိုတုန့်ပြန်မည်။အ ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ဘုရားသခင်ကသူကိုပြန်ချစ်နိုင်ရန်၊လုပ်နိုင်စွမ်းပေးထားသည်။ ဤအရာသည်ဝတ်ပြုကိုး ကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ခလေးများကိုပြောရန်မှာဒီသော့ချက်ကိုစီစဉ်ရန် အရေးကြီးသည်---ကျွန်တော်၏ အသက်တာ၌ဗဟိုသည်ဘာလဲ?
သင်၏အသက်၏ဗဟိုသည်ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊၀တ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ခလေးများကြီလာသည်နှင့်သူတို့၏အသက်တာ ကိုဗဟိုပြုနိုင်သည်။ အခြားသူများတွေးခေါ်သလို( အရည်အချင်းတူသူ ဖိအားပမာဏ) ၊ အားကစား၊ ကျောင်း၊ မိသားစု၊ သက်မွေးမှုလုပ်ငန်း၊ ပျော်ရွှင်မှုများ။ ပိုက်ဆံ၊ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများစုဆောင်းခြင်း။ ထိုအရာများနှင့်ဘာပြဿနာမှမရှိပါ။ ဘုရားသခင်ကဤအရာများကို၊ ကျွန်တော်တို့အတွက်သာရာကြည်နှုးမှု ရရန်ဖန်ဆင်းထားသည်။ ထိုအရာများသည် အသက်တာ၏ဗဟိုနှင့်မပတ်သက်ပါ၊သူတို့သည် မကြာရှည်ကြပါ။
သင်၏အသက်တာ၏ဗဟိုတွင် သက်မွေးမှုလုပ်ငန်းထားသော်၊ ဤအရာသည်ထွက်သွားမည်။ အသက်တာ၏ ဗဟိုတွင်ငွေထားလျှင် သင်ရှုံးမည်၊ သင်၏အသက်တာ၏ဗဟိုတွင် ကျန်းမာရေးရောက်ရှိလာလျှင်၊ ဆုံးရှုံးနိုင် သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ပျောက်ကွယ်သွားမည်နှင့်သင်သည်ရင့်ကျက်လာသော်လည်းလုံခြုံမှုမရှိပါ။ သင်၏အသက်တာဗဟိုတွင် ဘုရားသခင်ကိုထားလျှင်ခိုင်မာတောင့်တင်းသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်ကိုသင်ထံမှယူဆောင်မသွားနိုင်ပါ။
မိဘများ၏အဓိကတာဝန်ရှိခြင်းသည်၊ ကလေးများကို ဘုရားသခင်အားချစ်ခင်မြတ်နိုးကြရန်သင်ကြားပေးရကြ မည်။ ဤအရာသည် ပထမ အတိမ်းအစောင်း မခံသောရွေးရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ခလေးသည်ကျက်မှတ်ရ မည်၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအရာသည်၊ရွေးချယ်မှုအတွက်သူတို့ခဏခဏသူတို့အသက်တာတွင်နေရာ တိုင်းတွင်တွေ့ကြရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုအသက်တာ၏အလည်ဗဟိုတွင်ထားမလား၊ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်ကိုသင်၏အသက်တာအလည်ဗဟိုတွင်ထားမလား?
ကျွန်တော်တို့၏ခလေးများသည်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးချစ်ကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ကြပြီး၊ သူတို့၏အသက်တာ၏အလည်ဗဟိုတွင်ဘုရားသခင်ကိုထားလျှင် သူတို့သည်ခိုင်မြဲစွာရပ်တည်နိုင်ပြီး သူတို့ကိုစိန်ခေါ်သူများကို ရင်ဆိုင်နိုင်ကြသည်။
Monday May 16, 2011 12:00 AM Posted by Rick Warren